महीनावारीको बेला सेक्स गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् ! « Mero LifeStyle
महिनावारी भएको बेला शारीरिक सम्पर्क गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्नको उत्तर अधिकांशले खोज्छन् । विज्ञका अनुसार रजस्वला भएको समयमा शारीरिक सम्पर्क राख्न त्यति सुरक्षित हुँदैन । तर यस्तो बेलामा शारीरिक सम्पर्क गर्दा के कस्ता सावधानीहरु अपनाउन सकिन्छ त ? यस्तो बेला सेक्सलाई सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउन यी महत्वपूर्ण सल्लाहहरू अपनाउन सकिन्छ ।
सेक्स पार्टनरसँग कुराकानी
यौनसम्पर्क अघि दुवैले एक अर्कासँग कुरा गनुपर्छ । उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ सोध्नुपर्छ र एकअर्काको विचार र चासोहरूको बारेमा खुलेर कुरा गर्नुपर्छ । सुरू गर्नु भन्दा पहिले दुवैलाई यसको रुचि भएको हुनुपर्छ ।
महिनावारी भएको बेला यौन सम्पर्क अघि खाटमा तौलीयाको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले खाटमा प्रयोग भएको बेड सिटमा कुनै पनि प्रकारको दाग लाग्न पाउँदैन । तौलीयाको छनोट गर्दा गाढा रंगको गर्नुपर्छ यसमा दागहरु देखिने सम्भावना कम हुन्छ ।
मेन्सुरेसन कप वा प्याड हटाउनु पर्छ
महिनावारी भएको बेला यौनसम्पर्क गर्दा मेन्सुरेसन कप वा प्याड लगाउनु भएको छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । यौन सम्पर्कअघि प्याड र कपलाई हटाइएन भने विभिन्न समस्याहरु आउनसक्छ ।
गर्भनिरोधक उपाय अपनाउनु पर्छ
पीरियड्स भएको बेला पनि गर्भ रहन सक्छ, त्यसैले कण्डम वा अन्य गर्भनिरोधक औषधिको सेवन गर्नुपर्छ । पीरियड्समा विभिन्न रोगबाट संक्रमित हुने जोखिम उच्च हुन्छ, तसर्थ संक्रमणबाट बच्न कण्डमको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
शरीरलाई राम्ररी सफा गर्नुपर्छ
सेक्सको लगत्तै, पानी र हल्का साबुनले आफूलाई राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा स्नान गर्नु राम्रो हुन्छ । सेक्स गरेपछि अधिक दुखाई वा असहज महशुस हुन्छ भने डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ ।